काठमान्डुको मुटु चिथोर्दै, धुलो उडाउँदै, रातारात काठमान्डुलाई भत्काउँदै, पुर्दै मेलम्चीको पानी सहर पस्ने तर्जुमामा छ ।
भद्रगोल शर्मा | Published on 2017-02-15 |
तपाईं राजधानीबासी वा राजधानीमा पाहुना या कुनै काम विशेषले आउनुभएको पनि हुनसक्छ । एकाएक तपाईंको आसपासमा कतै धुलैधुलो, मैलैमैलो, भताभुङ्ग, खाल्डा र खुल्डी देखिए भने याद गर्नुस् मेलम्ची आउँदैछ ।
पानी आउनै लाग्या हो । त्यसैले धुलो उडेको हो ।
बुझकीहरु भन्छन्, लक्ष्य अनुसार काम भएन । नेपालमा जन्मिसकेपछि लक्ष्य र समयका कुरा बढ्ता नगरेकै राम्रो । आक्कल झुक्कलमात्रै प्रोजेक्टहरु समयमा सम्पन्न हुन्छन् । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कानुनी अनेक झन्झट छिचोल्दै निर्धारित समयावधिभित्रै काम गर्न कहाँ सजिलो छ र । मान्छेकै कुरा गरौं न, आखिर कसको पो जिन्दगीले समयमै लक्ष्य भेटेको छ र ? धन्दा नमान्नुस्, अब मेलम्ची आयो आयो !
पोहोर सालसम्म कतै केही देखिएकै थिएन तरपनि आश लागेकै थियो । एकदिन मेलम्ची पानी आउनेछ भन्ने विश्वास मनको कुनामा कहीँकतै लुकेकै थियो । यसपालि राजधानीमै यतिविधि धुलो उडिसकेपछि नपत्याउने काम छैन ।
यसअघि केही ठूलाबडाले इस्वी सम्वत् २०१६ मा पानी आउँछ भनेर फुर्ती नलाएका हैनन् । यो इस्वी सम्वत्‌वाला हिसाब पनि फुस् भयो । पानी आएन । फेरि अर्काथरीले २०७३ मेष संक्रान्तिमा मेलम्चीको पानीले नुहाउने भन्नपनि भ्याए । त्यो पनि पार लागेन । ठूला गफ गर्नेले पानी ल्याउने कुरा त परै जाओस्, अलिकति धुलो उडाउनसम्म सकेनन् । काम गर्दागर्दै पार नलागेपछि क्यार्नु त !
फेरि भुइँचालोले भद्रगोल बनायो । हजारौं जनताको उठीबास बनाउने भुइँचालोले मेलम्चीलाई नछुने कुरै भएन । मेलम्चीको चालमा समेत निष्ठुरी भुइँचालोले ब्रेक लगायो । अनेक गञ्जागोलमा परेर मेलम्ची पानी योजनाले भने बमोजिम समयमा प्रगति गर्न सकेन ।
यस्ता नानाथरीका उल्झन, हैरान र झन्झट किनारा लागेपछि फेरि काम सुरु भयो । जसोतसो अघि बढ्न थाल्यो । ठीक त्यही बेला सुरुङ खन्दा खन्दै पहेँलो चीज भेटियो । लौ है! पानी खोज्दा सुन भेटियो भन्ने हल्ला चल्यो ।
सुन भेटिएको हल्लाले रमिता हेर्नेको भीड लाग्यो । आखिरीमा सुरुङ खन्दा निस्केको पहेंलो चीज सुन पनि होइन, तामा पनि होइन भन्ने पुष्टि भयो । यसरी जमिनमुनि लुकेर बसेको माइका नाम गरेको चीजले समेत सुरुङ खन्नमा अवरोध गर्‍यो ।
जमिनमुनि र जमिनमाथिका देखिने/नदेखिने अनेक चीजबीजको सामना गर्दै मेलम्ची पानी योजनाले काठमान्डुको मुटुमै धुलो उडाउन थालिसकेको छ । मान्छेहरु भन्दै छन्, अब भने मेलम्ची आइछाड्छ ।
४० लाख मानिस बस्ने काठमान्डु उपत्यकामा दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको आयोजना १७ वर्षको लक्का जवान भइसकेको छ । त्यसैले पनि मेलम्ची आयोजनाले यति धेरै धुलो उडाएको हुनुपर्छ भन्ने भद्रगोल शर्माको ठम्याइ छ ।
काठमान्डुको मुटु चिथोर्दै, धुलो उडाउँदै, रातारात काठमान्डुलाई भत्काउँदै, पुर्दै मेलम्चीको पानी सहर पस्ने तर्जुमामा छ । अचेल मेलम्चीको पानी दशैंअघिसम्म आइसक्ने गाइँगुइँ चल्न थालिसकेको छ ।
धुलोभित्र हराएर दुईचारजनाले बाटो बिराउनु, पानी ल्याउनका लागि खनेको ढ्वाङमा दुईचारजना पर्नु, पिचबाटो भत्काइनु आदि झिना-मसिना कुरामा अल्झिने काम छैन । सर्खारले यति ठूलो काम गर्दा कसैलाई रुघाखोकी लाग्नु, कसैका लुगा मैलिनु ठूलो कुरा हैन । यिनै विषयमा कोकोहोलो मच्चाउनेहरु विकासका सारथी होइनन् । यो कुरो बुझ्नु जरुरी छ ।
जुन तालले, जस्तो चालले, जसरी भएपनि अब मेलम्चीको पानी राजधानी भित्रिने पक्कापक्की भैसक्यो । दशैंअघि कि पछि ? भन्ने विषय मुख्य होइन । काठमान्डुमा यतिविधि धुलो जो उडेको छ । नपत्याउनुपर्ने कुरै छैन ।
अब मेलम्ची आयो आयो । बाइरोडको बाटोमा, धुलो उडाउँदै ।